Mayelana NATHI - Huizhou Winmax Sport Co., Ltd.
kugudlukele ebhodini lebhodi
Itafula leHockey lomoya
Njengomhlinzeki omkhulu waseChina kuma-dartboards namatafula womdlalo, sizinikela ekuhlinzekeni isisombululo esisodwa sokuma kuzo zonke amabhiliyade akho nezidingo zakho zokudlala.
IWIN.MAX imele i-'All for Sports 'futhi ihlala ibeka imizamo yokuqamba izinto ezintsha, inebanga lomkhiqizo elibanzi elihlanganisa izigaba ezahlukahlukene zemidlalo.
Njengomhlinzeki omkhulu waseChina kuma-dartboards namatafula womdlalo, sizinikela ekuhlinzekeni isisombululo esisodwa sokuma kuzo zonke amabhiliyade akho nezidingo zakho zokudlala. Siphatha uhla olubanzi kakhulu lwamathebula echibini, amatafula e-foosball, amatafula ethenisi etafuleni, amatafula e-hockey, amabhodi wamabhodi wamabhodi, ama-dartboards kagesi, izesekeli ze-dart nokuningi e-China. Siphakela izingane kanye nabantu abadala.
Asibekanga kuphela amazinga embonini yekhwalithi kepha futhi nomklamo wanamuhla. Siphinde futhi sandise iphothifoliyo yethu yomkhiqizo ukuhlangabezana nezidingo ezikhulayo ezivela kumakhasimende ethu.
IWIN.MAX Sports ithengisa imikhiqizo yayo ngqo kubathengi ngokusebenzisa izitolo zomkhiqizo, izitolo zasefekthri, kanye ne-e-commerce nangamakhasimende wezohwebo kumaketanga ezimpahla zezemidlalo, abathengisi abakhethekile, abathengisi abaningi, amakilabhu okuzivocavoca kanye nabasabalalisi. NgoDisemba 2020, iWIN.MAX Sports yenhlangano yokuthengisa ihlanganise amazwe angama-20.
Izwe / Isifunda Sasefekthri Isitezi 2, No. 6 Isakhiwo, No. 49, Zhongkai 2nd Road, Huizhou City, Isifundazwe saseGuangdong, China
Unyaka Usungulwe 2013
Uhlobo lwebhizinisi Umkhiqizi, Inkampani Yokuhweba
Imigqa Yokukhiqiza 3
Inani Lokukhipha Lonyaka US $ 5 Million - US $ 10 Million
Amandla we-R & D Kukhona / kukhona Abangaphansi Kwabantu Abayi-5 ama-R & D Engineer (s) enkampanini.
Ithimba lethu liqukethe abasebenzi abanolwazi kule makethe, emgqeni ofanayo webhizinisi kule minyaka eyishumi edlule. Ithimba lethu labantu abathengisayo linolwazi lokuzibonela emakethe futhi ligcina ubudlelwane obuhle kakhulu namakhasimende.
Sikumkhankaso wokusiza abasabalalisi bathuthukise amabhizinisi abo futhi bathole inzuzo yokuncintisana ngokuxhaswa kwemikhiqizo yethu.
SiyiNkampani Yezimpahla Zemidlalo.SiyiWIN.MAX.
I-WINMAX igxile ekuhlinzekeni umhlaba ngobubanzi obugcwele bezimpahla zezemidlalo zokungcebeleka ezisezingeni eliphakeme.
IHuizhou Office: Igumbi 702, Isakhiwo A, iZhongxin Times Square, Jiangbei, Huizhou City, Guangdong, China
I-Guangzhou Office: 3 / F, Block 1, Nimble Huamei International, No.1-1, Gongye Er Lu, Dashi, Panyu, Guangzhou, China
Ifektri: 2 / F, Bldg. 6, No. 49, Zhongkai 2nd Road, Huizhou City, Guangdong, China
Sishayele Manje: 0086 752 2828 892 ext. 601
© Copyright - 2020-2022: Wonke Amalungelo Agodliwe.